Afbarwaaqo - Wikipedia
Afbarwaaqo waa degmo ka tirsan degmooyinka gobolka mudug waxaana kataliya dadka deegaanka waxaa daga beesha shiikhaal reer samatar caagane iyo beesha reer nimcaali sacad dadka degaanka waa dad aad u jecel horumarka iyo nabada waxay hada ledahay magaaladu Isbitaal iyo Dugsi hoose dhaxe sare iyo adeegyada guud waayo magalaada waa magaalo xadaarad fog leh inkastoo dagaaladii sokeye uu burbuur baaxad weyn iyo sabacad iyo iidaan iyo afweyn iyo tuulooyin badan waxana ka arimiya maamulka galmudug.Degmada Af_barwaaqowaa degmo ka tirsan Degmooyinga gobolka Mudug.
Magaalada Afarwaaqo waxay hada ledahay isbitaal iyo Dugsi hoose dhaxe iyo adeegyada guud waayo magalaada waa magaalo xadaarad fog leh inkastoo Dagaaladii sokeye uu burbur baaxad leh sogaaray magaalada. Sidoo kale degmadu waa magaalo facweyn oo ku caan ah barashada diinta islaamka sidoo kale waa magaalo ganacsi af barwaaqo waa degmo caan ku ah biyaha iyo daaqa. (GREEN ZONE) sidoo kale waa Degmo caan ku ah wax soo saaraka dalaga beeraha iyo dhaqashada xoolaha sida geela ariga iyo Lo’da. Xoolaha degmadaan waxaa loo iib geeyaa dhamaan gobolada kale ee dalka iyo waliba dalka Saudi Arabia. Waxaa xiriir ganacsi oo aad u facweyn la leh degmadaan shirkada dhoofinta xoolaha ee indho deero oo ah shirkada kaliya ee heysata ogolaanshaha dhoofinta xoolaha ee deegaanka. Dadkeedana waxaa lagu qiyaasaa 190000 ilaa 210000 ruux, boqol & sagaashan kun ilaa laba boqol iyo toban kun.waxayna Ku Dhacdaa Goboladda Dhexe .
Magalladu waa magaalo qaarami ah oo ku xasusinaysa waqtiyo hore sida dawladi dhaxe ee siyad barre waxana ku yaalla schooladi iyo xabsiyadi waaga ay dhistay dawladi dhaxe ee Soomaaliya. Degmada Af-barwaaqo waa Degmo aad u qurux badan xiliga barwaaqada waxayna leedahay dhir fara badan oo inta badan abaar & aaranba cagaaran. Ugu Danbeyntii Degmada Af-Barwaaqo waxaa Ka socda Horumar badanOoy iska kaashanayaan Dadweynaha Degmada af-barwaaqo iyo qurba joogta ka soo jeeda Degmada Af -barwaaqo.
Degmooyinka Gobolka Mudug
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Afbarwaaqo&oldid=163492"
Last edited on 27 Oktoobar 2016, at 00:25
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 27 Oktoobar 2016, marka ee eheed 00:25.